လက်ကား Marine Pattern Style ပျစ်ပျစ် နှင့် ခြစ်ရာ အခမဲ့ Microfiber သန့်ရှင်းရေး အဝတ်အထည် ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ရောင်းချသူ |Wuxi ပြည်ထောင်စု
Marine Pattern ပုံစံ ပိုးမွှားများနှင့် အခြစ်ရာ ကင်းစင်သော Microfiber သန့်ရှင်းရေး အဝတ်အထည်
နူးညံ့သိမ်မွေ့သော PU Microfiber သန့်ရှင်းရေးအထည်
ဘက်စုံသန့်ရှင်းရေး၊ တာရှည်ခံပြီး ဆေးကြောနိုင်သည်။
ခြစ်ရာ ကင်း၍ မည်သည့်မျက်နှာကိုမျှ ထိခိုက်မှု မရှိပါ။
ပစ္စည်း: 70% polyester၊ 20% polyurethan၊ 10% polyamid
Package :2ခု/ set
【လုပ်ဆောင်ချက်】: မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း သန့်ရှင်းရေး
1.Extra fine microfibers- မိုက်ခရိုဖိုက်ဘာအဝတ်များ ၏ သန့်ရှင်းမှု စွမ်းဆောင်ရည် အလွန်မြင့်မားသောကြောင့် ဆပ်ပြာအသုံးပြုမှု နည်းပါးသဖြင့် ဖုန်မှုန့်များနှင့် အဆီများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ကြီးမားသော သန့်ရှင်းရေးစွမ်းရည်နှင့် ကြီးမားသော အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားနိုင်သည့် ပမာဏကို ပေးဆောင်သည်။
2.Super absorbent- ရေများစွာဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်၊ မိုက်ခရိုဖိုက်ဘာပုဆိုးများသည် ပွတ်တိုက်မှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ရေ၊ စွန်းထင်းမှု၊ ဖုန်မှုန့်စသည်တို့ကို ထိရောက်စွာစုပ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
3.စိုစွတ်သော သို့မဟုတ် အခြောက်လှန်းခြင်း- ခြောက်သွေ့သောအခါတွင်၊ ဤမိုက်ခရိုဖိုက်ဘာအဝတ်များသည် သေးငယ်သောအမှုန်အမွှားများကို ကောက်ယူရန်နှင့် ဓာတုပစ္စည်းများမပါဘဲ နူးညံ့သောမျက်နှာပြင်များကို သန့်ရှင်းစေရန်အတွက် အငြိမ်လျှပ်စစ်ကို အသုံးပြုသည်။၎င်းတို့သည် စိုစွတ်နေသော သို့မဟုတ် သင်နှစ်သက်သော သန့်ရှင်းရေးဖြေရှင်းချက်များနှင့်လည်း အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
3.Versatile သန့်ရှင်းရေး- မိုက်ခရိုဖိုက်ဘာသန့်ရှင်းရေးအဝတ်s သည် မျက်နှာပြင်အားလုံးကို ထိထိရောက်ရောက် သန့်စင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။၎င်းတို့သည် ပန်းကန်အ၀တ်အထည်များ၊ ဖုန်မှုန့်ပြုလုပ်ရန်၊ ပြတင်းပေါက်များ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများနှင့် အခြားနူးညံ့သောမျက်နှာပြင်များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အတွက် အံ့သြဖွယ်ကောင်းပါသည်။ မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖို၊ ပန်းကန်များ၊ အိုးများ သို့မဟုတ် ဒယ်အိုးများမှ အဆီနှင့် အမှုန်အမွှားများကို လွယ်ကူစွာ ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
4. တာရှည်ခံပြီး ပြန်သုံးနိုင်သည်- အရည်အသွေးမြင့် ချုပ်လုပ်ထားသော အနားသတ်များဖြင့် ညှပ်ထားခြင်း၊
5.ရေဆေးနိုင်သောစက်- ဤအရာများသည် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် လွယ်ကူပြီး အထပ်ထပ်အခါခါ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
1.ဤစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် 10 နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံ
2. ထုတ်ကုန်အသစ်များဖန်တီးခြင်း၊ OEM & ODM ကမ်းလှမ်းမှုအားကောင်းခြင်း။
3. ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများနှင့် ကျွမ်းကျင်သော နည်းပညာရှင်များရှိသည်။
5. ထောက်ထားစာနာပြီး အထောက်အကူဖြစ်စေသော အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်း။
ယခင်- အိမ်အလှဆင်ခြင်း အရည်အသွေးမြင့် Marble Jar Candle
နောက်တစ်ခု: ပလပ်စတစ်အကြီးစားစတုဂံ TPR ခြစ်ခြစ်ခေါင်းပန်းကန်စုတ်တံ
အစွမ်းထက်သော PET Bristle Toilet သန့်ရှင်းရေး စုတ်တံ နှင့်...
ပါတီအတွက် အလှဆင်ထားသော ရှားစောင်းလက်ဖယောင်းတိုင် အစုံ...
အရည်အသွေးမြင့် ဘက်စုံသုံး PET Scrub လက်ကိုင် ခိုင်ခံ့သော...
Eco ဖော်ရွေတဲ့ မီးဖိုချောင်သုံး ခြစ်ခေါင်းလက်ကိုင်...
Multi-function PP လက်ကိုင်မဟုတ်သော Woven Fabric stat...
အသီးအနှံ အသီးအနှံ သန့်ရှင်းရေး စုတ်တံ လက်ကိုင် စက်ဝိုင်း